About Us - Jinbiao Construction Zvekushandisa Co., Ltd.
HEBEI JINBIAO zvokuvakisa Tech Corp., LTD.
Our chikuru zvitarisirwa vanofanira kupa vatengi dzedu munyika yose vane unhu hwakanaka, yemakwikwi mutengo, kugutsikana kukurukura uye mabasa akaisvonaka. Customer kugutsikana ndiye chinangwa chedu chikuru. Tinogamuchira iwe kushanyira showroom yedu uye hofisi. Tiri kutarisira kuti asimbise ukama bhizimisi newe.
Hebei Jinbiao Construction Materials hwakavakirwa muna 1986 kushandisa kugadzirwa kuvakwa zvokunyama. Fekitari Our anopindura zvinopfuura 800,000m2 nzvimbo, vashandi vanopfuura 400, 40 nezvokurara, vakanyorwa guta guru rmb mamiriyoni 60.4, richisvika mamiriyoni 500 Currencykuva pamusoro liquidity.In Shijiazhuang, 26 December 2014, kambani akanga akanyorwa pamusoro Stock Exchange, achiva wokutanga kambani munharaunda dziri munharaunda, zvigadzirwa vari pamutemo goridhe mwero pajira riya, ruzha mechidziro aruminiyamu formwork muchiso. Mukutanga 90 wacho, Jinbiao vakapfuura ISO9001- 2000 unhu advertising kusanganisira "AAA yepamusoro giredhi advertising", "Hebei dunhu kunoshamisa emakambani", "aivimbwa zvebhizimisi", "njodzi kugadzirwa" uye dzimwe advertising chinokudza.
Hebei Jinbiao Construction Zvekushandisa Tech Corp., Ltd. ari mubasa kugadzirwa uye kukura waya pajira riya fencings, Barbed waya uye anoenderana zvigadzirwa vachishandisa Anping, yakakurumbira Wire Mesh Nyika China.
Product Quality: zvigadzirwa edu vakapfuura ISO9001 chitupa yepamusoro utariri ezvinhu, CE chigadzirwa advertising, uye pave-refu pamwe Acoustic Institutions kuSoutheast Asia. Kunze JINBIAO anoisa rinokosha unhu vaongo- chikwata kuitira kuti zvinhu zvose zviri anonyatsokwanisa.
Production capacity: JINBIAO Company ine 3 kugadzirwa miriwo kusanganisira Wire Mesh Fence, Sound Zvinotadzisa uye Aluminum Formwork. Daily kugadzirwa vanokwanisa vanogona kusvika 18km noruzhowa, 5000 m2 ruzha Miganhu, uye 8000 hrs H simbi pambiru. Aluminum Formwork yakagadzirwa uye dzikabereka anopfuura 10 nemhando zvivakwa pamwedzi.
Jinbiao ari vakapakata pamusoro 80 anoita yokutanga mukirasi kugadzirwa rokuongorora uye R & D midziyo kubudisa mativi romukova waya pajira riya noruzhowa, welded waya pajira riya rwakapetwa, neketani kubatana noruzhowa, huku waya pajira riya, makwai / mombe / munda noruzhowa, Barbed waya uye ruzha chipingamupinyi kuti pasi pose vatengi.
Tine mureza kugadzirwa uye kwakakwana unhu kudzora mamiriro kuitira yepamusoro zvigadzirwa kusangana vatengi dzedu 'zvinodiwa.
kambani yedu akunda mukurumbira wakanaka mune China uye isu Export zvigadzirwa kunyika dzakawanda uye kumatunhu.
Nokuti kwenyu fence zvinodiwa, tapota nesu zvino!
Our chinangwa inotevera ndiyo kusapfuudza netarisiro yose nemhosva nokupa hunoshamisa vatengi, vakawedzera mukana wokushandiswa uye kukosha zvikuru. All ose, pasina vatengi vedu isu havapo; pasina kufara uye kugutsikana zvizere vatengi, tikatadza. Tiri kutsvaka Wholesale, Drop chikepe. Tapota kutirovera runhare kana uri anonakidza zvinhu zvedu. Tariro kuita bhizimisi nemi mose. High yepamusoro uye nokutsanya zvacho!
Kubvira pakagadzwa redu, tinoramba kuvandudza zvinhu zvedu uye vatengi. Tinokwanisa kukupa zvakawanda yepamusoro bvudzi zvinhu panguva zvemakwikwi mitengo. Uyewo tinogona kubereka zvakasiyana bvudzi zvigadzirwa maererano ivhu renyu. We kungoomerera yepamusoro uye anonzwisisa mutengo. Kunze kwaizvozvo, isu zvinopa zvakanakisisa OEM basa. We noushamwari OEM zvirevo uye vatengi rose pamwe nesu yakawiriranwa kukura mune ramangwana.
Parizvino rokutengesa edu samambure ari kukura nguva, kuvandudzwa basa unhu kusangana vatengi kuti kudiwa. Kana uchifarira chero zvigadzirwa, tapota nesu panguva chero nguva. Tiri kutarisira kuti nokuumba abudirire mabhizimisi ukama newe ramangwana.
Tinopa dzakasiyana-siyana zvigadzirwa mumunda uyu. Kunze, customized mirairo iripo. Chii zvakawanda, uchanakidzwa zvakaisvonaka mabasa edu. Mushoko rimwe, kugutsikana kwako ndeyechokwadi. Welcome kushanyira boka redu! Kuti uwane mamwe mashoko, tapota vanouya website.If yedu kuzombotaurazve kubvunzurudza, tapota inzwa wakasununguka nesu.
Yakapedzwa Zvakakwana — Rongwu High-spe ...
Iyo nyowani yekuratidzira horo
Jinbiao's aluminium zvigadzirwa